Laôsy - Wikipedia
I Laôsy na Laôsa dia firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana. Ny renivohiny dia i Vientiane. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mirefy 236 800 km2 ny velarantaniny ary miisa 6 500 000 ny mponiny araka ny fanisana natao tamin' ny taona 2012. Ny faritr' ora dia +7.
Sainan' i Laôsa
Saritanin' i Laôsa
I Laôsy no hany firenena ao amin' ny Saikanosy Indôsinoa tsy manana morontsiraka. Be tendrombohitra i Laôsy, ary ny ampahany be amin' ny taniny dia rakotra ala, ahitana hazo sarobidy isan-karazany. Ny korian-drano dia mifandray amin' ny ony Mekong izay iray amin’ ireo ony lavabe any Azia.
Maro dia maro ny karazam-bahoaka hita ao Laôsy. Ny ankamaroan' ny mponina any dia Bodista sady tambanivohitra (80 %).
Miompana amin' ny fambolena ny toekaren' i Laôsy. Ao amin' ireo faritra be tany lonaka manodidina an' i Mekong no anatanterahana ny karazam-boly toy ny kafe, ny katsaka, ny landihazo, ny legioma, ny paraky ary ny vary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Laôsy&oldid=1046078"
Dernière modification le 1 Jolay 2022, à 11:58
Voaova farany tamin'ny 1 Jolay 2022 amin'ny 11:58 ity pejy ity.